အသုံးဝင်လှတဲ့ ထိပ်တန်း အင်တာနက် အတိုကောက် Acronym (၁၂) ခု - Myanmar Network
အသုံးဝင်လှတဲ့ ထိပ်တန်း အင်တာနက် အတိုကောက် Acronym (၁၂) ခု
Posted by Soe Soe Win on February 10, 2015 at 15:14 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Acronym ဆိုတဲ့ စကားဟာအင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေရဲ့ ထိပ်ဆုံးက အက္ခရာတွေကို စုပြီးအတိုကောက် လုပ်ခေါ်တာကိုပြောတာပါ။ ဥပမာ as soon as possible ကို ASAP လို့ အတိုကောက် acronym နဲ့ ရေးသားပြောဆိုသလိုပေါ့။
အင်တာနက်မှာတော့ ဒီလို acronym တွေ သုံးလာတာ ကြာခဲ့ပါပြီ။ အထပ်ထပ်အခါခါ ပြန်ပြန် သုံးရတဲ့ စကား အရှည်ကြီးတွေကို ထိပ်ဆုံး အက္ခရာတွေနဲ့ အတိုကောက်လုပ်ပြီး သုံးတဲ့အခါ ဆက်သွယ်ရေးမှာ ပိုမို လျှင်မြန် ချောမွေ့တာပေါ့။ အဲ…ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီ အသုံးတွေက အင်တာနက်ပေါ်က "ချက်တင်" သုံးတဲ့ သူတွေ အချင်းချင်း အတွက်တော့ အလွန် အဆင်ပြေ ကောင်းပြေနိုင်ပေမဲ့ လုံးဝ မသုံးဘူးသူ တစ်ဦး အတွက်ကတော့ ခေါင်းခြောက်လောက်တယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ အင်တာနက် ချက်တင်ကျွမ်းတဲ့ ကလေးနဲ့ သူ့အမေ မိုဘိုင်းဖုန်းက နေအပြန်အလှန် ပို့တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
အမေ - “Where are you? Dad needs the car.” (ဘယ်ရောက်နေလဲ။ မင်းအဖေကားသုံးဖို့ ရှိတယ်။)
သား - “I’d B OMW but BFF wants BK AGKWE. I’ll BRT ASAP.”
အမေ - “WHAT?! Just call me!” (ဘာတွေလဲ။ ဖုန်းဘဲ ပြန်ဆက်တော့။)
သားဖြစ်သူ ပြန်ရေးလိုက်တဲ့ ဟာကို စာဖတ်သူကိုယ်တိုင် ဘာသာပြန်ကြည့်ပါ။ စဉ်းစားလို့ မရဘူးလား။ ခဏထားလိုက်ပြီး အောက်မှာဖေါ်ပြခဲ့မဲ့ acronym ၁၂ ခုကို ကြည့်လိုက်ရအောင်။
၁။ EOM: end of message
“We’re leaving, EOM.” (ဒါဘဲ…)
၂။ WYSIWYG: what you see is what you get
“I’m not dressing up, WYSIWYG.” အရှိအရှိအတိုင်းဘဲ။ (ဘာမှ ဆင်မထားဘူး)
၃။ AFC or AFK: away from computer or away from keyboard
“Sorry I didn’t reply right away, I was AFK while I madeasandwich.” (ငါလောလောဆယ် ကွန်ပြူတာနားမှာမရှိဘူး)
၄။ AGKWE: and God knows what else
“After that party, we’re out of pop AGKWE.” (ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လဲဘုရားဘဲသိလိမ့်မယ်)
၅။ AIMB: as I mentioned before
“AIMB, all of my chickens got loose.” (စောစောက ပြောခဲ့သလိုဘဲ)
၆။ BION: believe it or not
“Olive oil is actually so healthy that some say you should haveaspoonfuladay, BION.” (ယုံချင်ယုံ၊ မယုံချင်နေ)
၇။ CMIW: correct me if I’m wrong
“CMIW, but did you just drive past us?” ငါ မှားရင် ပြင်ပေး (ငါ မမှားဘူးဆိုရင်)
၈။ IRL: in real life
“IRL, zombies don’t exist. Probably.” တစ်ကယ် (လက်တွေ့မှာ)
၉။ IYKWIM: if you know what I mean
“There’s nothing likeablueberry pie, IYKWIM.” ငါပြောတာသဘောပေါက်တယ် မဟုတ်လား။ (သဘောပေါက်လား/ ပေါက်တယ်မို့လား)
၁၀။ NUFF: enough said
“Don’t mess around with an angry badger. NUFF.” တော်ပြီ။ (တော်တန်တိတ်တော့)
၁၁။ BRB: be right back
“Hold on! BRB” (အခုပြန်လာနေပြီ)
၁၂။ ROFL: rolling on the floor laughing
“Have you seen recent xkcd? ROFL!” (ရီလိုက်ရတာဖတ်ဖတ်မော)
အပေါ်ကအတိုကောက် ၁၂ လုံးက အခု အတော် ခေတ်စားနေတဲ့ internet acronym အတိုကောက် ၁၂ လုံးဖြစ်ပါတယ်။ Internet acronym မြောက်များစွာထဲက အချို့ တွေကို game ကစားသမားတွေကအများကြီးပါဝင်ကစားတဲ့ multiple game players တွေက အချင်းချင်း အတိုကောက်တွေ တီထွင်ပြီးသုံးကြရင်းက အောက်ပါ acronym တွေ ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
OMW: on my way. လာနေပြီ။ game player တွေကနေရာ တစ်နေရာမှာ တွေ့ဖို့ ချိန်းဆိုကြတဲ့အခါ အချင်းချင်း စာရိုက်ပြီး အတိုကောက်တွေနဲ့ ချိန်းတော့ ပိုမြန်တာပေါ့။
BRT: be right there. လာခဲ့မယ်။ OMW နဲ့ အတူတူပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ OMW လောက် သိပ်မသုံးကြဘူး။
GTG: got to go. ဒိုးရတော့မယ် (သွားတော့မယ်) game ကနေ log out လုပ်ပြီးထွက်တော့မယ်လို့ ပြောတာ။ သာမာန်ဖုံး text message တွေမှာလည်းအသုံးဝင်ပါတယ်။
“I’ve GTG to the store after work”
“Nice chatting, but I’ve GTG”.
ကဲ…ဒီလောက်ဆိုရင် အစောပိုင်းက သားအမိနှစ်ယောက် အပြန်အလှန် text message ပို့တဲ့ အထဲက သားဖြစ်သူ ဘာပြန်ရေးလိုက်လဲဆိုတာ ဘာသာပြန်လို့ မရခဲ့ရင် အခု ပြန်ကြိုးစား ကြည့်လို့ ရပြီနော်။ မရသေးရင်တော့ အောက်မှာ ကြည့်လိုက်ပါ။
“I’d B OMW” = “I’ll be on my way”
“BFF wants BK AGKWE” = ‘best friend forever’ wants Burger King and God knows what else”,
“I’ll BRT ASAP” = “I’ll be right there as soon as possible” ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဖြင့်ရင် GTG နောက်မှတွေ့မယ်နော် C U L8R!!
Grammar.net မှ Victoria ရဲ့ Top 12 Useful Internet Acronyms ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Givingacompliment (ချီးမွမ်းစကားပြောကြားခြင်း)
Acronym ဆိုတဲ့ စကားဟာအင်ျဂလိပျစကားလုံးတှရေဲ့ ထိပျဆုံးက အက်ခရာတှကေို စုပွီးအတိုကောကျ လုပျချေါတာကိုပွောတာပါ။ ဥပမာ as soon as possible ကို ASAP လို့ အတိုကောကျ acronym နဲ့ ရေးသားပွောဆိုသလိုပေါ့။
အငျတာနကျမှာတော့ ဒီလို acronym တှေ သုံးလာတာ ကွာခဲ့ပါပွီ။ အထပျထပျအခါခါ ပွနျပွနျ သုံးရတဲ့ စကား အရှညျကွီးတှကေို ထိပျဆုံး အက်ခရာတှနေဲ့ အတိုကောကျလုပျပွီး သုံးတဲ့အခါ ဆကျသှယျရေးမှာ ပိုမို လြှငျမွနျ ခြောမှတေ့ာပေါ့။ အဲ…ဒါပမေဲ့ အဲ့ဒီ အသုံးတှကေ အငျတာနကျပျေါက "ခကျြတငျ" သုံးတဲ့ သူတှေ အခငျြးခငျြး အတှကျတော့ အလှနျ အဆငျပွေ ကောငျးပွနေိုငျပမေဲ့ လုံးဝ မသုံးဘူးသူ တဈဦး အတှကျကတော့ ခေါငျးခွောကျလောကျတယျ။ ဥပမာအနနေဲ့ အငျတာနကျ ခကျြတငျကြှမျးတဲ့ ကလေးနဲ့ သူ့အမေ မိုဘိုငျးဖုနျးက နအေပွနျအလှနျ ပို့တဲ့ မကျဆခြေျ့ကိုဖတျကွညျ့လိုကျပါ။
အမေ - “Where are you? Dad needs the car.” (ဘယျရောကျနလေဲ။ မငျးအဖကေားသုံးဖို့ ရှိတယျ။)
အမေ - “WHAT?! Just call me!” (ဘာတှလေဲ။ ဖုနျးဘဲ ပွနျဆကျတော့။)
သားဖွဈသူ ပွနျရေးလိုကျတဲ့ ဟာကို စာဖတျသူကိုယျတိုငျ ဘာသာပွနျကွညျ့ပါ။ စဉျးစားလို့ မရဘူးလား။ ခဏထားလိုကျပွီး အောကျမှာဖျေါပွခဲ့မဲ့ acronym ၁၂ ခုကို ကွညျ့လိုကျရအောငျ။
“I’m not dressing up, WYSIWYG.” အရှိအရှိအတိုငျးဘဲ။ (ဘာမှ ဆငျမထားဘူး)
“Sorry I didn’t reply right away, I was AFK while I madeasandwich.” (ငါလောလောဆယျ ကှနျပွူတာနားမှာမရှိဘူး)
“After that party, we’re out of pop AGKWE.” (ဘာတှေ ဆကျဖွဈလဲဘုရားဘဲသိလိမျ့မယျ)
“AIMB, all of my chickens got loose.” (စောစောက ပွောခဲ့သလိုဘဲ)
“Olive oil is actually so healthy that some say you should haveaspoonfuladay, BION.” (ယုံခငျြယုံ၊ မယုံခငျြနေ)
“CMIW, but did you just drive past us?” ငါ မှားရငျ ပွငျပေး (ငါ မမှားဘူးဆိုရငျ)
“IRL, zombies don’t exist. Probably.” တဈကယျ (လကျတှမှေ့ာ)
“There’s nothing likeablueberry pie, IYKWIM.” ငါပွောတာသဘောပေါကျတယျ မဟုတျလား။ (သဘောပေါကျလား/ ပေါကျတယျမို့လား)
“Don’t mess around with an angry badger. NUFF.” တျောပွီ။ (တျောတနျတိတျတော့)
“Hold on! BRB” (အခုပွနျလာနပွေီ)
“Have you seen recent xkcd? ROFL!” (ရီလိုကျရတာဖတျဖတျမော)
အပျေါကအတိုကောကျ ၁၂ လုံးက အခု အတျော ခတျေစားနတေဲ့ internet acronym အတိုကောကျ ၁၂ လုံးဖွဈပါတယျ။ Internet acronym မွောကျမြားစှာထဲက အခြို့ တှကေို game ကစားသမားတှကေအမြားကွီးပါဝငျကစားတဲ့ multiple game players တှကေ အခငျြးခငျြး အတိုကောကျတှေ တီထှငျပွီးသုံးကွရငျးက အောကျပါ acronym တှေ ပျေါလာခဲ့ပါတယျ။
OMW: on my way. လာနပွေီ။ game player တှကေနရော တဈနရောမှာ တှဖေို့ ခြိနျးဆိုကွတဲ့အခါ အခငျြးခငျြး စာရိုကျပွီး အတိုကောကျတှနေဲ့ ခြိနျးတော့ ပိုမွနျတာပေါ့။
BRT: be right there. လာခဲ့မယျ။ OMW နဲ့ အတူတူပါဘဲ။ ဒါပမေဲ့ OMW လောကျ သိပျမသုံးကွဘူး။
GTG: got to go. ဒိုးရတော့မယျ (သှားတော့မယျ) game ကနေ log out လုပျပွီးထှကျတော့မယျလို့ ပွောတာ။ သာမာနျဖုံး text message တှမှောလညျးအသုံးဝငျပါတယျ။
ကဲ…ဒီလောကျဆိုရငျ အစောပိုငျးက သားအမိနှဈယောကျ အပွနျအလှနျ text message ပို့တဲ့ အထဲက သားဖွဈသူ ဘာပွနျရေးလိုကျလဲဆိုတာ ဘာသာပွနျလို့ မရခဲ့ရငျ အခု ပွနျကွိုးစား ကွညျ့လို့ ရပွီနျော။ မရသေးရငျတော့ အောကျမှာ ကွညျ့လိုကျပါ။
“I’ll BRT ASAP” = “I’ll be right there as soon as possible” ဘဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒါဖွငျ့ရငျ GTG နောကျမှတှမေ့ယျနျော C U L8R!!
Grammar.net မှ Victoria ရဲ့ Top 12 Useful Internet Acronyms ကို ကိုးကားဘာသာပွနျထားတာဖွဈပါတယျ။
အင်ျဂလိပျစကားဖွငျ့ တောငျးပနျခကျြကို ဖျောပွခွငျး၊ အသိအမှတျပွုခွငျး
Givingacompliment (ခြီးမှမျးစကားပွောကွားခွငျး)
အခွားသငျခနျးစာမြား ဖတျရှု လလေ့ာရနျ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-l...
Permalink Reply by thiriwinzaw on February 10, 2015 at 17:48
Permalink Reply by khin kyi on February 10, 2015 at 18:02
Permalink Reply by swe oo lwin on February 10, 2015 at 18:40
Permalink Reply by Aung Htay Oo on February 10, 2015 at 18:45
Permalink Reply by Aung Soe Thu on February 10, 2015 at 21:34
Permalink Reply by Hnin Nway Naing (刘华山) on February 11, 2015 at 6:15
Permalink Reply by thinkhaingsoe on February 11, 2015 at 7:42
Permalink Reply by K Lwin on February 11, 2015 at 10:23
OH! WOW! I didn't know about that before ,and I really appreciate the poster of this topics & wishing you that you are gettingalot of knowledge in return. Thanksamillion!
Permalink Reply by Nini Myint on February 11, 2015 at 11:44
xo nice....thanksamillion.
Permalink Reply by WIN HTET HTET KHINE on February 11, 2015 at 17:35
Permalink Reply by Khoon Hset Nay on February 13, 2015 at 16:58
Wow Gr8t!!! I like !!! Plz let's me share this post on my FB.
Permalink Reply by Yan Naung Soe on February 14, 2015 at 19:25